ukulinganisa: uMartin Vrijland
I-Coronavirus indlela emfutshane kwi-teknoloji yobukomanisi bebuchwephesha, uGqr. Shiva Ayyadurai
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	14 Aprili 2020	• 10 Comments
UGqr. U-Shiva Ayyadurai une-MIT PhD kwi-Biological Engineering kwaye ke uyazi ukuba uthetha ngantoni xa kufikwa kwintsholongwane. Uza ngokugxekwa ngokuqatha nguGqr. U-Anthony Fauci, indoda ekhokelela ngqo kwindlela yokujongana nokuqhambuka kwekhorakhtha e-US. UGqr. I-Ayyadurai ngusihlalo we-senator we […]
Isongezelelo kwincwadi yakho 1
Kufakwe kuyo INCWADANA YOKUFUNDA, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	14 February 2020	• 11 Comments
Kufakwe kuyo UKUBHALA, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	10 February 2020	• 17 Comments
Kukho umkhukula omkhulu kumabali alientsomi aliqela kwihlabathi liphela. Kwiinkolo ezinkulu zehlabathi oku kubizwa ngokuba ngumkhukula kwaye uNowa ngulowo wakha umkhombe ukuzalisa umhlaba emva komsindo kaThixo ngendlela yezikhukula. Oko ngokwayo sele ibonisa ukuba kukho iqumrhu elingu […]
Isongezelelo kwincwadi yakho 2
Kufakwe kuyo INCWADANA YOKUFUNDA, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	12 Januwari 2020	• 8 Comments
Uninzi lusenokuba nokuthandabuza umbono wokuba singaphila kwihlabathi eliqinisekileyo kwikamva. Apho sisebenzisa iindlela zethu zokufaka i-bandwidth ecothayo yeengqondo zethu, ezinje ngamehlo, iindlebe, impumlo, ulwimi, uchuku kunye nokunye okunje, i-BCI (Brain Computer Interface) evela kwi-Neuralink (enye yeenkampani ze-Elon Musk) sele sele [ ...]
Kufakwe kuyo UKUBHALA	by UMartin Vrijland	22 Julayi 2019	• 19 Comments
Lixesha lokuba uphume kwihlabathi lephupha kwaye uqalise ukujonga kwihlabathi elikujikeleze ngento efanelekileyo. Oko kuya kuzisa utshintsho olusisiseko ebomini bakho. Ndingathanda ke ukuba ndibonise le ngcaciso-ntsingiselo ilandelayo nguRichard Thieme (emazantsi eli nqaku), owayesakuba ngumfundisi oguqukele ekubeni […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	19 Julayi 2019	• 11 Comments
Kweminye yindlela yokusindiswa: ukudibanisa ne-AI kunye nokuphila ngendlela efanelwe ngayo into engakwazi ukwahlula kwizinto zangempela. Ndasebenzisa loo mazwi ambalwa ku-Elon Musk kwingoma engezantsi. Ndiyathemba ukuba kukukhuthaza ukuba ucinge malunga nokuba ngaba sele sinawo [...]
Abo bafunde le nqaku malunga nabantu abahlazileyo (i-NPCs) ngoku bangaqonda ukuba igama elithi "ingqondo" okanye "umphefumlo" linokuthelekiswa noxhumo olungenazintambo phakathi kwesikhombiselwano sengqondo kunye ne-avatar ngokulinganisa. I-avatar ekulinganiseni, njengokuba kunjalo, ilawulwa ngaphandle kwaye iphefumlelwe. Kulo nqaku [...]
Utyelelo lulonke: 4.164.143